Ive makore makumi maviri nemashanu here kubva paaya manhamba manomwe? Ndizvozvo. Uye tinoaverenga here kana kuti kwete? | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fikisheni yesainzi, Fantasy, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
1992 Rakanga riri gore iro isu tese tinorangarira nekuda kwezviitiko zvakasiyana. Ndichitarisa kumashure ku munda wezvinyorwa Ndawana mashoma mazita anozivikanwa izvo zvakabudiswa ipapo. Ko kana, 25 makore apfuura akaita sei mazita anozivikanwa Gordon, Harris, Murakami, Prachett, Jennings, Moccia, uye Ellroy akaburitsa aya mabhuku. Ngatirangarirei.
1 Shaman - Noah Gordon
2 Vamwari Vadiki - Terry Prachett
3 Mamita matatu kumusoro kwedenga - Federico Moccia
4 Homeland - Robert Harris
6 Maodzanyemba emuganhu, kumadokero kwezuva - Haruki Murakami
Gordon anotendeuka makumi mapfumbamwe ikozvino muna Mbudzi uye ndeimwe yeiyo Vazhinji vanozivikanwa vekuAmerican nhoroondo vanyori. Zvichida basa rake rinozivikanwa ndeichi trilogy nyeredzi mhuri yekole pamwe chete nemazana emakore. Zita rake rekutanga raizivikanwa Chiremba uye ichi chikamu chechipiri chinoenderera kuAmerican West uye icho chakaburitswa makore 25 apfuura. Yakavhara Dr. Cole.
En Shaman chiremba Robert Jacobson Cole anotiza nyika yake yekuScotland nemwanakomana wake kugara munyika itsva dze America. Mushure mekushanda muBoston, padivi pechiremba anovhiya Oliver Colmes, Robert nemwanakomana wake vachaenda kune vasina kudzidza Oeste kudzidza zvisingazivikanwe Kuporesa Tsika dzevaSauk maIndia. Uye parwendo irwo vachasangana nerudo, kuwanikwa, hondo uye hupenyu.
Vamwari vadiki - Terry Prachett
El tenzi wezvakanaka zvinyorwa akatisiyira makore mashoma apfuura. Saka iwe unogona kugara uchimubhadhara mutero nekuverenga mamwe emabasa ake. Izvi zvakaburitswa makore makumi maviri nemashanu apfuura uye ndiyo yechipiri yakazvimirira inova kubva kuDiscworld zvakasikwa (yekutanga ndeye Pyromides). Prachett parody, ine kubata kwakanyanya kweChirungu, pfungwa senge la hondo nezvitendero.
Mamita matatu kumusoro kwedenga - Federico Moccia
Iye asina chokwadi mambo weItaly we rudo nyaya yevechidiki akatanga kukwira kwake mumhando iyi nemusoro uyu. Akatitaurira nyaya ye muchengeti wemwana, iyo a modhi mudzidzi uye mwanasikana akakwana. Zvakare, Nhanho ine chisimba uye cheeky. Ivo vanobva kumarudzi maviri akasiyana zvachose, asi izvo hazvivatadzise kubva kudanana kupfuura magungano ese. Nekudaro, irwowo rudo runopokana rwavachafanirwa kurwira kupfuura zvavaifunga. Zvese zvinoitika mu Guta Risingagumi, iyo yaisagona kuve iri nani mamiriro kune aya maRomeo naJuliet azvino uno.
Uyu uchrony Munyori weBritain anotengesa zvakanyanya ava nemakore makumi maviri nemashanu uye anoramba ari nyowani. Tiri mugore 1964 uye a Anokunda Wechitatu Reich iri kugadzirira kupemberera gore rechi75 raAdolf Hitler. Asi ipapo chitunha chisina kupfeka chemurume mukuru chinoonekwa ichiyangarara mudziva re Berlin. Izvi zvinoshanduka kuva mukuru webato, uye inotevera mune yakavanzika rondedzero iyo mutongo werufu kune vese vakanyorwa mariri. Uye vanga vachidonha mumwe mushure meumwe mu conspiracy izvo zvangotanga.
Este Munyori weAmerica aive munyori ane mukurumbira we nhoroondo yenhau nemazita ekubudirira se Aztec o Mufambi. Izvi zvakare zvaive uye zviri a zvakakosha yevose vanoda mabhuku akareba iwayo asi e kuverenga kwakanaka uye kunonakidza.
Hawk inotiudza iyo inofungidzirwa ndangariro dze protagonist, iyo goth Thorn, uyo ane chaizvo zvakasikwa, taura mabasa ake nezviitiko kubva kwaari kujairika kusangana pabonde mumamongi maviri kusvika a chinoshamisa rwendo muEurope yose. Pakutanga mukambani ye wyrd, mukuru wezana weRoma uyo ava muvhimi uye mubati uye anomudzidzisa kurarama musango. Zvino munzwa uchasangana woita hushamwari Theodoric, mambo weOstrogoths, waachashanda sa mukuru uye mumiriri.
Maodzanyemba emuganhu, kumadokero kwezuva - Haruki Murakami
Munyori ane mukurumbira wechiJapan uye asingagumi anoshuvira kune anoverengeka Nobel tiudze pano yakasarudzika ngano yeanoda akarasika uye akawanikwazve. Hajime murume anowedzera kana kushoma anofara, akaroora, baba vevasikana vaviri uye muridzi wejazi kirabhu, uyo unosanganazve naShimamoto, shamwari kubva paudiki uye kuyaruka uyo anga asati anzwa kubva zvakare. Ivo vaviri, vari vana chete, vaive vagovana zvekuvaraidza uye zvakavanzika kuchikoro. Uye zvino, makore gare gare, vanokwezvwa zvisina tariro. Asi Hajime inova inofungidzirwa uye anoita kunge anoda kumusiira zvese.
Jazz chena - James Ellroy
El zita rekupedzisira yekufona Los Angeles Quartet yakaburitswa muna 1992 kupedzisa yakakosha nhevedzano muhunhu hwematsotsi. Kupenga Imbwa Ellroy chengeta chikamu chevanyori yakaonekwa mukati LA Chakavanzika uye zvechokwadi nguva nenzvimbo.
Iye protagonist ikozvino ndiye Lieutenant David Klein kwavari kufa, kurohwa, nekubiridzirwa ingori njodzi dzebasa. Asi mukudonha kwe 1958 iyo feds inovhura i iKuongorora huori hwemapurisa uye maziso ese, kufungirana, uye kupomerwa zvakanangidzirwa kuna Klein. Uye kunyangwe hazvo akabatsira kugadzira iyo nyika yemakaro uye kuda chinzvimbo, ndichaedza kubuda ndiri mupenyu kwake chero zvodii.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Ive makore makumi maviri nemashanu here kubva paaya manhamba manomwe? Ndizvozvo. Uye tinoaverenga here kana kuti kwete?